အမေရိက ဈေးကွက်အတွင်း ဒီဇယ်စွမ်းအင်သုံး ကားတွေကို စွန့်ခွာတော့မယ့် Mazda! – MyMedia Myanmar
အမေရိက ဈေးကွက်အတွင်း ဒီဇယ်စွမ်းအင်သုံး ကားတွေကို စွန့်ခွာတော့မယ့် Mazda!
Skyactiv-D ဆိုတာ ကတော့ အားလုံးလည်း ကြားဖူးပြီးသားဖြစ်လောက်တဲ့ စကားလုံး တစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အဆိုပါ အင်ဂျင်အမျိုးအစားကတော့ Mazda ရဲ့ အမှတ်သညာ လို ဖြစ်နေပေမယ့် အခု အချိန်မှာ အမေရိက ဈေးကွက်အတွင်း Mazda ရဲ့ ဒီဇယ် အင်ဂျင်တွေ အပေါ် အသုံး ပြုမှုရပ်ဆိုင်းလိုက်ခြင်းနဲ့ အတူအဆိုပါ အင်ဂျင်တွေလည်း နှုတ်ဆက်ရတော့မယ့် အခြေအနေ ပါ။ တစ်နည်း ဆိုရမယ်ဆိုရင် အခုအခြေအနေဟာ ဒီဇယ်စွမ်းအင် အပြည့်အဝသုံး Mazda6Mid-Size Sedan ရောက်မလာနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် လည်း သက်ရောက် နေသလို ဒီဇယ် စွမ်းအင် ကို သုံးပြီး တစ်ဖန်ပြန်လည် ထွက်ပေါ်လာမယ် လို့ သိထားရတဲ့ CX-5 Compact SUV ကား အတွက် လည်း မျှော်လင့်ချက် ဝေဝါးတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်သွားပါတယ်။ အဆိုပါ CX-5 SUV ဟာဆိုရင် အမေရိက ဈေးကွက်ထဲမှာ ကုမ္ပဏီ ဘက်ကနေ 2018 Model အဖြစ် ရောင်း‌အား ကောင်းခဲ့သေးတဲ့ မော်ဒယ်လည်း ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
တကယ်တော့ အခုလိုမျိုး အမေရိက ဈေးကွက်ထဲမှာ Skyactiv-D ရဲ့ နှုတ်ဆက် လိုက်ရမှု သတင်းဟာ အနည်းငယ် တော့ ထိတ်လန့်သွား စေခဲ့တာအမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်တုန်းကလည်း 2019 Mazda CX5ကို Turbo Diesel 2.2 Liter Four-Pot အဖြစ် ဖန်တီး လိုက် တုန်းကတော့ ကားရဲ့ ဈေးနှုန်းကလည်း ထောင်ဂဏန်းအထိ တက်သွားတာကို တွေ့လိုက် ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အဆိုပါ SUV ကားရဲ့ နဂိုရှိပြီးသား Standard Gas-Power သုံး 187 hp စွမ်းရည်ရှိ 2.5 Liter Inline-Four အင်ဂျင် ရဲ့ လုပ်အားနှုန်း ကိုပါ အတော် လေး သိသိသာသာ တိုးတက် သွားစေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းတွေအရ ‌ထူးထူးခြားခြား မှတ်တမ်း တင် ရလောက်တဲ့ အနေအထားတင် မကပဲ CX5ရဲ့ ဒီဇယ် စွမ်းအင် ကြောင့် ကားရဲ့ အရှိန် နှုန်းအင် အားတွေ ကိုပါ သိသိသာသာ တိုးတက် ပြောင်းလဲ သွား စေတာ ကိုလည်း အသိအမှတ် ပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခန့်မှန်းကြည့်ရသလောက်တော့ SUV ရဲ့ နဂို ရနိုင်ပြီးသား 227 hp ပမာဏ ( Premium Fuel အပေါ်မှာ ဆိုရင် 250 hp ) ကိုမှ Turbocharged 2.5 Liter Four-Cylinder အင်ဂျင် ရဲ့ ပေါင်းစပ်အားနဲ့ ဆိုရင် သေချာ ပေါက် မြင့်တက်သွားလေ့ ရှိတာကိုလည်း မြင်ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် 2,000 rpm ပမာဏ မှာ ရရှိ နိုင်တဲ့ 310 lb-ft Torque ပမာဏ ဟာ ဆိုရင် Gas စွမ်းအင် သုံး အင်ဂျင်မှာ ဆိုရင်တော့ Diesel ရဲ့ Torque ပမာဏ ပေါင်းစပ်မှု ကြောင့် 20 lb-ft ‌ပမာဏ လောက် တိုးတက် သွားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ဒီဇယ် စွမ်းအင်ကို ရွေးချယ်ရခြင်းရဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းတစ်ချက် ကတော့ 3,500 ပေါင် လောက် ရှိတဲ့ Towing Capacity ကို စွမ်းဆောင် နိုင်လို့ပဲ ဖြစ်ကာ Gas စွမ်းအင်သုံး အခြားသော အစိတ် အပိုင်းတွေ နဲ့ စာရင် 1,500 ပမာဏ လောက် အထိကို တိုးတက်သွားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Diesel စွမ်းအင်သုံး Mazda6ဟာ ယခင် က CX-5 ရဲ့ လမ်းစဉ် ကို လိုက်နိုင်ဖို့ အတွက် အတော်လေးကို ခက်ခဲ နေခဲ့တဲ့ သဘော ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Sedan ရဲ့ Naturally Aspirated Gas စွမ်းအင်သုံး အင်ဂျင်ကြောင့်သာ Fuel Economy နဲ့ Straight Line စွမ်းဆောင်ရည် တွေကိုရရှိ နိုင်ပြီးသား ဖြစ်ပြီး Gas Turbo Engine တွေကြောင့် လည်း Diesel ရဲ့ Low-End Grunt ထက် သာလွန်သွားတဲ့ အနေအထား ဖြစ်ကာ ဈေးနှုန်း အရ လည်း ပိုမို နည်းပါးသွားတာကိုပါ တွေ့ရပါတယ်။
CX-5 တုန်းက အင်ဂျင် ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်း တစ်ရပ်ကတော့ သူ့ရဲ့ Towing Capacity ပိုင်းပါပဲ။ အခု Mazda6မှာလည်း အဆိုပါ အပိုင်းကတော့ ကြီးကြီးမားမား ပြောင်းလဲ လာနိုင် တာမျိုး မရှိနိုင်ပေမယ့် ကားထုတ်လုပ်ရေး ဘက်ကတော့ Sedan ကားတစ်စီး ကို Towing ဘက်ကို အားစိုက်ပြီး အသုံးမပြုဖို့ အတွက် ပိုပြီး လိုလားတဲ့ အနေအထားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားတစ်နည်း ဆိုရရင်တော့ အမေရိက ဈေးကွက်အတွင်း ယခင် တုန်းက Skyactiv-D ရဲ့ အင်ဂျင်ကို အချိန် အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိ ကို ဆက်လက် ရပ်တည် နိုင်ဦး မယ် လို့ မျှော်လင့်ရပေမယ့်လည်း အခုတော့ တရားဝင် အနေအထားနဲ့ပဲ နှုတ်ဆက် ရဖို့ ရှိလာခဲ့ပြီ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The post အမေရိက ဈေးကွက်အတွင်း ဒီဇယ်စွမ်းအင်သုံး ကားတွေကို စွန့်ခွာတော့မယ့် Mazda! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-16T14:00:43+06:30January 16th, 2021|MYCARS MYANMAR|